Maxay la micna tahay in marlabaad lagu dhaso Kirishtaan?
Su’aal: Maxay la micna tahay in marlabaad lagu dhaso Kirishtaan?
Jawaab: Maxay la micna tahay in marlabaad-lagu dhaso Kirishtaan? Qoraalka ugu sareeyo ee Baaybalka ee ka jawaabo su’aashaan waa Yooxanaa 3:1-21. Ciise Masiixiga Ilaaheyga ahaa wuxuu la hadlayaa Nicodemus, fariisigii caanka ahaa iyo xubin ka mid ah Guddiga (xisbiga talada hayey ee Yahuuda). Nicodemus wuxuu ula yimid Ciise habeenkii qaar kamid ah su’aalo.
Sida Ciise ula hadlay Nicodemus, Wuxuu yiri, “‘waxaan kuu sheegayaa runta, ma jiro qof arki karo boqortooyada Ilaahey ilaa markale uu ka dhasho isaga.’ ‘Sidee ayuu aadanaha u dhalan karaa marka uu duqoobo?’ Nicodemus ayaa weydiiyay. ‘Dhabtii ma geli karo waqti labaad caloosha hooyadiis si uu markale u dhasho!’ Ciise ayaa ka jawaabay, ‘waxaan kuu sheegayaa runta, ma jiro qof geli karo boqortooyaa Ilaahey ilaa uu ka dhaso biyaha iyo Ruuxa. Dhiiga wuxuu dhalaa dhiig, laakin Ruuxa wuxuu dhalaa ruux. Yaanlala yaabin hadalkeyga, “Waa in aad markale dhalataa”’” (Yooxanaa 3:3-7).
Jumlada erayadan “dhalashada mar labaad”micna ahaan waxay la mid tahay “sare ka dhalo marlabaad." Nicodemus wuxuu leeyahay baahi dhab ah. Wuxuu u baahanyahay isbedel qalbigiisa ah—isbedel ruuxa ah. Dhalasho cusub, oo marlabaad la dhalanayo, waa dhaqanka Ilaahey meeshaas oo nolosha weligeed lasiiyay qofka aaminsan (2 Korintos 5:17; Tittos 3:5; 1 Butros 1:3; 1 Yooxanaa 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Yooxanaa 1:12, 13 wuxuu tilmaamaa in noqoshada “dhalashada marlabaad”sidoo kale ay waddo fikrada “noqoshada carruurta Ilaahey” ee dhinaca rumeynta magaca Ciise Masiixi.
Su’aasha sida macquulka ah waxay timid, “Sababta shaqsiga uu ugu baahanyahay in uu marlabaad dhasho?" Rasuulkii Paul ee Efesos 2:1 wuxuu yiri, “Iyo adiga Wuxuu sameeyay nolol, ee ku dhinteen xadgudub iyo dambi" (NKJV). Roomanka wuxuu qoray, “Dhammaan kuwa galay dambiyo iyo ka gaabiyay ammaanta Ilaahey" (Rooma 3:23). Dambiilayaasha ruux ahaan way “dhintaan”; goortii ay ka helaan nolol ruux ahaan oo dhinaca iimaanka Masiixiga, Baaybalka wuxuu u ekyahay in uu dib u dhashay. Kaliya kuwa marlabaad dhashay ayaa dambigooda la cafiyay iyo Ilaahey xiriir la leh.
Sidey midaas ku noqoneysaa? Efosos 2:8-9 waxay sheegeen, “Oo naxariisteeda ah waxaa lagu badbaadiyay, dhinaca rumeysiga ah—iyo tani kama imaanin shaqsigaada, waa naxariista Ilaahey—ma ahan shaqada, si markaas qofna uusan ugu faanin." Goortii qof la badbaadiyo, isaga/iyada marlabaad ayay dhasheen, ruux ahaan la cusbooneysiiyay, iyo hadeer waa canug Ilaahey ee dhalashada cusub. Aaminsanaanta Ciise Masiixiga, Qofka dhiibay ciqaabta dambiyada Markuu ku dhintay istilaabka, waa micnaha lagu “dhalanayo markale." “Sidaas darteed, haddii uu qofwalba ku jira Masiixiga, waa abuur cusub: duqnimadii way tagtay, cuseybka ayaa yimid!" (2 Korintos 5:17).
Haddii aadan weligaa aaminin Ciise Masiixiga Ilaaheyga sida Badbaadiye, ma tixgelin laheyd kaas oo keenay Ruuxiga Quduuska sida uu qalbigaaga ula hadlay Isaga? Waxaad u baahantahay in aad marlabaad dhalatid. Ma tukan laheyd salaada dambi dhaafka iyo noqon laheyd abuurida cusub ee Masiixiga maanta? “Weli dhammaan kuwa soo dhaweeyay, kuwa aaminay magaciisa, wuxuu siiyay xaqa ay ku noqdaan carruurta Ilaahey— carruurta aan ku dhalan ficilka dabiiciga, ma ahan go’aanka aadanaha ama rabitaanka ninkeeda, laakin dhalashad Ilaahey” (Yooxanaa 1:12-13).
Haddii aad rabtid in aad u ogolaatid Ciise Masiixiga sida Badbaadiyahaaga iyo dhasho marlabaad, halkaan waa tusaale tukusho. Xasuuso, adigoo dhahayo docodaan ama doco walba oo kale kuma badbaadineyso. Kaliya waa aaminaada Masiixiga ee kaa badbaadin kara dambiga. Docodaan waxay si fudud uga fogtahay waddada loogu muujinayo Ilaahey rumeyntaada Isaga iyo u mahadceli Isaga oo badbaadintaada ah. “Ilaagey, waan ogahay in aan dambi kaa galay iyo waxaan istaahilaa ciqaab. Laakin Ciise Masiixi ayaa dambiga aan istaahilay qaatay si markaas dhinaca rumeyntiisa iyadoon ku jirto layga cafin karo. Aaminaadeyda adiga ayaan kugu meeleeyay ee badbaado ah. Waad ku mahadsantahay naxariistaada cajiibka ah iyo cafiskaaga—naxariista nolosha daa’inka! Aamiin!"